Kambodza: Vehivavy Mpandraharaha sy ny Valantserasera · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jona 2011 5:00 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 한국어, Español, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, Aymara, English
Natsangana tao amin'ny facebook ny vondron'ny Vehivavy Kambodziana ao amin'ny fandraharahana ny volana Novambra 2009 mba hizarana ny traikefa ananan'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny fandraharahana sy ny hisiana tambazotra ao Kambodza. Nanomboka hatreo, dia nisy hatrany ny fivoriana notontosain'ny fikambanana izay notohanan'ny Famatsiambola Iraisampirenena ho amin'ny Fiarahamiasa ao Kambodza. Ny herinandro lasa teo, nahomby ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany nialan'ny volan'ny tsirairay ny fikarakarana azy.
Eo amin'ny 40 eo ireo mpandray anjara tamin'ny fihaonana tamin'ny 3 jona izay niresahana indrindra momba ny andraikitry ny Facebook tamin'ny fanamorana ny fandraharahana sahanin'ny tsirairay. Nandray anjara tamin'izany fotoana izany ny bilaogera, ny mpandraharaha, ny vehivavy mpandraharaha, ary ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena.
Sary avy amin'i @home. Sary nalain'i Jerry
Nifantoka momba ny fisongadinan'ny fitaovana fampitam-baovao anaty fiaraha-monina izay mety hahazo mpanaraka manampahaizana betsaka kokoa raha oharina amin'izay tratran'ny fampitam-baovao mahazatra. Manaraka izany, nahazoana sosokevitra maromaro amin'ny fomba fampiasana ny Facebook hampiroboroboana ny asa aman-draharahan'ny tsirairay ny tafatafa isan-tokony sy ny mpandray anjara.
“Nizara torohevitra i Ana sy i Jerry mba ampitomboina ny isan'ny mpankafy: omeo fanasana ny namana [rehefa eo am-piseraserana izy, dia afaka mamaly haingana ny fangatahana namana ataona ho azy], entanina ireo namana mba hanindry ny bokotra” tiana ” rehefa miseho eo amin'ny pejiny ny mombamomba anao ary voalaza na hita ao amin'ny mombamomba azy kosa ny zavatra ataonao, ampiasaina ny dokam-barotra “.
Avy eo niadian-kevitra ihany koa ny fampandehanana ny e-varotra amin'ny alalan'ny Facebook. Linda Lee, tanora mpianatra eny amin'ny oniversite sy tompona magazay an-tserasera antsoina hoe “Unique Style Online Shop,” dia nandrisika ny mpandraharaha isan-karazany hampiasa ireo karazana valantserasera mba hampitomboana ny tombombarotry ny orinasa. Nanamarika i Linda:
Sary avy amin'ny mpanoratra: Linda Lee ilay vehivavy mitazona microphone
“Raha mivarotra an-tserasera ianao, ambany dia ambany ny masonkarena: tsy mila tahirin'entana, tsy mila magazay, manofa trano, jiro, mpiasa.”
Nanoro hevitra koa izy fa mahomby kokoa ny fampiasana haivarotra sy ny paikadim-barotra amin'ny fampiasana fiteny mahafinaritra hisian'ny fifampiresahana tsara amin'ny mpanjifa. Nolazainy ihany koa ny lanjan'ny fanamorana fanaterana ny entana lafo sy ny fanamorana ny fomba fandoavam-bola. Nizara paikam-barotra vitsivitsy ihany koa izy:
“mampiasà teny mamy sy ny fiteny ampiasan'ny mpifanerasera aminao: hitokisany ianao (sariaka ianao) ka mifankahazo ianareo (nahoana no hampiasa ny teny Anglisy ara-pitsipi-pitenenana raha toa ka mampiasa fifangaroan-teny Khmer sy teny Anglisy fohy izy ireo). Mieritreritra izy ireo fa mitovy aminy ianao. Misy orinasa tantanin'ny lehilahy izay mikendry mpanjifa vehivavy (fitafiana, fitaovana fikojana ny tarehy) ary mampiasa ny voambolana mitovy sy ny fomba fiteny “woaw!” sy ny “sweetie!”, fanamarihana nataon'ny Vehivavy Mpandraharaha Kambodziana
Maro ireo mpandray anjara no liana hahalala bebe kokoa ny fomba fampiasana ny herin'ny valantserasera ho amin'ny tombotsoan'ny fandraharahana ataony. Maniry ihany koa izy ireo hahafantatra ny fomba tsara kokoa hifandraisana amin'ny mpanjifa. Izay tena zava-dehibe ihany koa dia ny fahitana fa ilaina ho amin'ny tambazotran'ny fandraharahana ao amin'ny firenena tokoa ilay fihaonana tsy ara-potoana. Manantena ny Dr. Lili Sisombat, mpikarakara ny hetsika sy mpanangana ny pejy “Vehivavy Kambodziana ao amin'ny fandraharahana” , fa haharitra hatrany ny tambazotra tokana momba ny fikambananan'ny fandraharahana.